कोरोनाका कारण अष्ट्रेलियामा गैरआवासीयहरूमाथि यात्रामा प्रतिबन्ध ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ६ चैत्र बिहीबार २०:०९
कोरोनाका कारण अष्ट्रेलियामा गैरआवासीयहरूमाथि यात्रामा प्रतिबन्ध !
कोभिड–१९ विश्वव्यापी रुपमा फैलिएपछि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सबै आगन्तुकहरूका लागि देशको सिमाना बन्दको घोषणा गर्नुभएको छ । अस्ट्रेलियाका आप्रवासी बासिन्दा तथा अन्य नागरिकलाई स्थानीय समयाअनुसार शुक्रबार राति ९ बजेदेखि देशमा प्रवेश गर्न निषेध गरिने बिहीबार भएको एक प्रेस सम्मेलनमा बताउनु भएको हो ।
गैर अष्ट्रेलियाली नागरिक र देशमा प्रवेश गर्न चाहने अन्य देशका नागरिकलाई यस्तो बन्देज गरिएको हो । अत्यावश्यकताको आधारमा प्रवेश गर्न चाहने तथा अष्ट्रेलियाली नागरिकलाई भने १४ दिन क्वारन्टाइनमा बस्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको पनि सो घोषणामा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मोरिसनले अष्ट्रेलियामा देखिएको सङ्क्रमणमध्ये करिब ८० प्रतिशत जति विदेशी नागरिकबाट सरेको पाइएको पनि जानकारी दिनुभएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारको स्वास्थ्य विभागकाअनुसार बिहीबार बिहानसम्म ५५६ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ । रासस
नेपालमा “लक डाउन” – अमेरिकामा खुलेरै प्रशंसा !
विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई प्रहरीले सम्पर्कमा आइदिन आग्रह गरेपछी !
मलेसियामा कोरोना भाइरस सङक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दाे, मृत्यु हुनेकाे संख्या २६ पुग्याे
युएई (संयुक्त अरब इमिरेट्स) मा दुई नेपालीसहित थप ७२ मा देखियाे काेराेना, हालसम्म दुई जनाकाे मृत्यु
PREVIOUS Previous post: प्रदेश नं.१ सरकारले तयार गर्‍यो २ सय जना विरामीलाई राख्न सकिने क्वारेन्टाइनस्थल
NEXT Next post: श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरी हेर्नुहोस् तपाईंको आजको राशिफल – वि.सं. २०७६ चैत्र ०७ गते शुक्रबार